Madaxwayne Qoorqoor oo Muqdisho soo gaadhay iyo Shirka ka dhacaya
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi uu hoggaaminayo oo fiidnimadii caawa soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweyne Qoorqoor iyo
Muqdisho ( Kalshaale ) Amiirkii dalka Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah ayaa ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla dalka Mareykanka. Sheikh Sabah oo 91 jir
Muqdisho ( Kalshaale ) Waxaa lagu wadaa in uu bilowda wejiga labaad ee dhamaystirka heshiiska Doorashooyinka, kadib markii baarlamaanku ansixiyeen heshiiska oo ka dhigeen sharci kumeel-gaar ah. Waxaa lagu wadaa in ...
Muqdisho ( Kalshaale ) Sahra Abuukar oo ka soo jeeda Soomaaliya, balse qaxooti ku ah Mareykanka ayaa ku guuleysatey tartanka quruxda haweenka Muslimiinta ee dalkaasi, kaas oo loo qabto sanadkiiba ...
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Armenia inay si deg deg ah uga baxaan dhulka Azerbaijan ee ay soo galeen, si loo dhameeyo dagaalka ...
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo ka qeyb-galay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku ...
Garoowe ( Kalshaale ) Wararka saaka laga helayo Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho ayaa sheegaya inay hakad ku jiraan duulimaadyada gudaha ee garoonkaasi. Waxaa la sheegay in shirkadaha duulimaadyada ay sameeyeen ...
Gaalkacyo ( Kalshaale ) Madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa Xerada ciidanka Indhaqaris ee ku taala duleedka degmada Gaalkacyo tababar ugu soo xidhay dufcaddii 1aad oo si buuxda ...
Ankara ( Kalshaale ) Guuleed Aadan Abdi iyo Hooyadii Maryan si fiican baa Turkey loogu soo dhoweeyey. Turkey waxay ku yimaaddeen martiqaad rasmi ah oo ku marti qaaday Wasiirka Arimaha Dibadda ...